Imithi yokwelapha ye-aconite: sebenzisa ngemithi esemthethweni nasendabuko - Ukukhiqiza ukukhiqiza - 2020
Izindawo zokwelapha ze-aconite tincture
Aconite ngokwemvelo akuyona into evamile kakhulu, kwezinye izindawo futhi nhlobo ekupheleni kokuqothulwa, kodwa izindawo zalo zokwelapha zilinganisiwe isikhathi eside. Emithi yokwelapha, izakhiwo zesitshalo zisetshenziselwa amacala amaningi, ngezinye izikhathi ezingenathemba, kodwa ngenxa yobuthi bawo, abaningi besaba ukusebenzisa i-aconite ekwelapheni.
Imiphumela yokwelapha ye-aconite emzimbeni womuntu
I-Aconite tincture kanye nezidakamizwa ezisemthethweni ze-antiticancer
Sebenzisa emithi yokwelapha: ukwelashwa kwe-aconite
Tincture yokwelashwa kwezifo zenhliziyo
I-Tincture yokwelashwa kwe-migraine namazinyo
Tincture ukusetshenziswa kwangaphandle
Ukumnika ukwelashwa kwesilonda se-duodenal
Umhluzi wokugeza amanxeba namathumba
Amafutha ngesisekelo somphekula wezinhlungu zesifo sofuba
Ukuqoqwa nokulungiselela izinto ezibonakalayo kusuka ku-aconite
Ukungafani. Usizo lokuqala lwe-aconite ubuthi
Ukwakhiwa kwamakhemikhali we-aconite
Ukwakhiwa kwe-aconite kucebile kuma-alkaloids, ama-acids, ama-resins, ama-macro-kanye nama-microelements. Ezimpandeni namaqabunga esihlahla kukhona ama-alkaloids eqenjini lokuqala, njenge:
benzoylakonin ene-predominance engxenyeni ye-aconitine.
Iqembu lesibili lama-alkaloids limelelwa napallin, ephedrine ne-spartein. I-Acid ekubunjweni kwe-aconite: transcanotine, steoric, citric, benzoic, palmitic, fumaric, linoleic, oleic, myristic. Impande yesitshalo iqukethe ama-saponins nama-flavones, ama-résins, isitashi, i-Daucosterol. Amahlamvu anama-tannins, ama-biocompounds, i-inositol, ama-flavonoids kanye inqwaba yamacroutrients ama-macro:
Ama-macronutrients: i-potassium, i-calcium, i-magnesium nensimbi.
Izakhi zokulandelela: ama-manganese, i-zinc, i-barium, i-nickel, i-boron, i-selenium, ihola, ithusi, i-chromium nabanye.
Futhi ekubunjweni kwe-aconite kukhona: ushukela, i-mesoinosidol ne-coumarin.
Uyazi? Ama-alkaloids ama-aconite atholakala ngo-1820 yi-pharmist waseFrance uPaschier, kodwa eyinhloko, ekhanyayo kakhulu - i-aconitine yayihlukanisiwe ngo-1833 yi-toxicologists yaseJalimane uGeger and Hesse.
Ukusetshenziswa komuntu olwa nomuthi wendabuko kunezinhlobo ezihlukahlukene, ngenxa yobuningi bayo obubuningi, kunezakhiwo eziningi ezizuzisa umzimba.
I-Alkaloids, etholakala ngobuningi ekubunjweni kwesitshalo, isetshenziselwa amalungiselelo amaningi okwelapha. Lezi zinto zinomthelela omkhulu wokwelapha. Zisetshenziswa njengama-sedatives, ama-painkillers nama-antispasmodics. I-Alkaloids inomthelela omuhle ohlelweni lwezinzwa zomphakathi. Ziyingxenye yezidakamizwa ze-expectorant izakhiwo, i-antihypertensive ne-hormonal.
Kubalulekile! I-alkaloids yinto enamandla futhi engaphephile. Ukwelashwa ngezidakamizwa ezisekelwe kuma-alkaloids kufanele kulawulwe udokotela ochwepheshe. I-tincture ye-aconite ene-overdose ingaba yingozi.
Izinto zokuncibilikisa ze-aconite zine-astringent, i-hemostatic, i-anti-inflammatory and bactericidal properties. Abantu abaningi bazi ukusetshenziswa kwe-aconite yomdlavuza. I-flavonoids ekubunjweni kwe-aconite inikeza umphumela omuhle ekwelapheni. Lezi zakhi zine-anti-inflammatory, anti-inflammatory, antioxidant kanye ne-anti-radiation effects.
Izidakamizwa eziqukethe i-aconite zine-estrogenic, i-diuretic nemiphumela ye-bactericidal. I-Aconite isetshenziselwa ekwelapheni izilonda, ngezinye izifo ezibangelwa yi-venereal, ngenxa ye-coumarin ekubunjweni kwesitshalo kuyasiza ezitheni ezivinjiwe nezinkinga zenhliziyo, ukuphazamiseka kwesimiso sezinzwa.
Ukwelashwa kwezicubu ezimbi nge-aconite kudinga ukuqapha nokucwaninga ngokucophelela zonke izinhlobo ze-nuances: kusukela ekulungiseleleni okulungile kwesitshalo kuze kube semkhakheni nesikhathi sokufunda. I-Aconitines ekubunjweni kwezidakamizwa ziyizici ezinokuhlukumezeka ezinezinhlu zemiphumela emibi.
Ukuqothula ama-alkaloids fighter akubhubhisi nje kuphela amangqamuzana omdlavuza, kodwa nomthelela omubi emangqamuzaneni anempilo emzimbeni. Ngokuyinhloko, lokhu kusebenza nasemithini yemithi ekhemotherapy esetshenziselwa imithi esemthethweni, kodwa nanamuhla, umlindi awuhlanganisiwe ohlwini lwezidakamizwa ezamukelwa yi-WHO njengokwelashwa kwe-oncology.
I-Aconite ithola uhlelo lokusebenza ku-oncology kumuthi wendabuko. Kukhona ubufakazi bokuthi i-aconite, esetshenziselwa izindlela eziyinhloko kanye nezinsizakalo, zibeka izinyawo zeziguli eziningi okungeke kuzisize imithi esemthethweni. I-Aconite ayinayo ukugxila okuncane: Isetshenziswa ezimweni eziningi, kokubili ngaphandle kokwelashwa kwezinkinga zesikhumba, nangaphakathi ngezifo eziningi.
Qaphela! Uma kukhona izingane ezincane endlini, izidakamizwa ezisekelwe ku-aconite kufanele zigcinwe ngaphandle kwazo.
I-Aconite tincture ne-decoctions esekelwe kuyo isetshenziselwa ekwelapheni izicubu ezinobuthi, i-asthma kanye nesifo sofuba. Amalungiselelo ngesisekelo se-aconite tincture ithuthukisa isimo seziguli ezine-multiple sclerosis, isithuthwane nesifo sokuphazamiseka. I-tincture iyasiza ukunciphisa ikhanda lezinyosi nezinyosi, izifo zomlomo, izinhlungu zesifo se-rheumatic, izimpawu ze-arthritis.
I-Aconite tincture isetshenziselwe ukwelashwa kwezifo zenhliziyo, izilonda ze-duodenal nesisu. Ngaphandle, i-tincture ithatha futhi ihlinzekela ukwelashwa kwamathumba, amanxeba ahlanzekile, i-psoriasis, i-eczema nezinye izifo zesikhumba.
Ukwelashwa kwezifo zenhliziyo kusetshenziswa izimpande ze-aconite:
10 g wezimpande;
I-litre elilodwa le-vodka.
Impande kufanele ichotshozwe, ichithe nge-vodka noma utshwala (60%), ishiye endaweni emnyama amahora angu-72. Ukucindezeleka ngaphambi kokusetshenziswa. Umbuso: amaconsi amabili ngosuku, kathathu ngosuku, athathwe ngaphambi kokuba adle ingxenye yehora, uphuze amanzi amaningi.
Ukulungisa i-tincture edingekayo:
500 ml ye-vodka;
20 g wezimpande ze-aconite.
Fakela kahle impande (sebenzisa owomile, hhayi okusha), uthele i-vodka. Ukuphikelela phakathi nesonto emfudumeni nasebumnyameni. Ukuze i-migraines, i-tincture ixubene esikhwameni sebusuku eyodwa isipuni. Uma izinyo zamazinyo zihlutshwa endaweni yinozinyo lesiguli. Uma kungekho ukucasuka noma ukusabela okweqile esikhumbeni, ungakwazi ukwandisa umthamo ku isipuni. Ukwelashwa akumele kudlule isikhathi esingaphezu kwamasonto amathathu.
I-Tincture yokusetshenziswa kwangaphandle iyalungiswa ngesisekelo somsitshalo, ukwelashwa kunikeza imiphumela emihle ngezinkinga ze-neuroallergic, ngokuhlukunyezwa kwesikhumba, izifo zesikhumba ezinonya, ne-melanoma. Sebenzisa i-tincture ukuze unciphise izimpawu ze-psoriasis, i-erysipelas ne-neurodermatitis. Ukupheka kuzodinga:
utshwala noma i-vodka 500 ml;
Izimpande ezomile 20 g
Umsuka uthele utshwala, ushiye ukunikeza isonto. Isixazululo esilandelayo kufanele sibe umbala weti eqinile. Lapho izifo zesikhumba zihlushwa kahle ezindaweni ezithintekile bese ugoqa ibhande elifudumele. Ukwelashwa ukuqhubeka okungaphezu kwenyanga.
Ekulungiseleleni ukumnika ukwelapha izilonda ze-duodenal sebenzisa izimpande ezomile ze-aconite efomini yomhlabathi. 20 g wezimpande uthele u-0.6 ml we-vodka, masibeke isonto endaweni emnyama. Thatha isipuni esisodwa kuya ezintathu ngosuku.
Umhluzi owomile u-aconite osetshenziswe ngempumelelo ekwelapheni kwamathumba namanxeba. Izimpande ezomile zika-15 g uthele ama-250 ml wamanzi abilayo, ubilise imizuzu engu-20. Susa kusuka ekushiseni, ukucindezeleka, okupholile. Amanxeba namathumba ahlanza kathathu kuya kwesine ngosuku.
I-Aconite-based-ointment isetshenziselwa ubuhlungu be-rheumatic, ukukhathazeka, i-fibroadenoma nobuhlungu emajoyini. Ukuze ulungiselele uthathe ama-5 g wempande (echotshoziwe) ku-200 ml wamafutha omnqumo. Amafutha ashisa ngamanzi okugeza. Esikhathini esidabukisayo sisetshenziswa, ukumboza kancane isikhumba.
Kuyathakazelisa Kusukela ezikhathini zasendulo kukholakala ukuthi i-aconite yayiyingxenye yamafutha omoyi. Kuthiwa, ukugcoba ngamafutha anjalo, abathakathi bazuza ikhono lokuhamba.
Ukulungiselela nokugcinwa kwe-fighter yezokwelapha kwenziwa emagulini, i-aconite i-poisons iyangena kalula e-pores yesikhumba. Zombili lezimpande kanye nezingxenye zomhlaba zesitshalo ziyasetshenziswa njengezinto eziwusizo zokulungiselela izidakamizwa. Izimpande zivunwa kusukela ngo-Agasti futhi ziqede ngo-Okthoba. Bakha, bahlanza umhlabathi onamathele futhi bahlanza.
Izimpande zomile ekamelweni lokuphuza umoya ekushiseni okufika ku-70 ° C. Gcina izinto ezitholakalayo zitholakale ekamelweni elomile ngaphandle kokufinyelela ekukhanyeni.
Amacembe ase-Aconite avunwa kusukela ngoJuni kuya kuJulayi, ngaphambi kokuqala kwezimbali. Phakathi nalesi sikhathi, lesi sitshalo siqoqa inani eliphelele lezinto eziwusizo. Ukuvuna amaqabunga aluhlaza kanye nama-inflorescences, engabonakali yizinambuzane. Izinto eziwusizo zihlungwa ngokulahla ukhula kanye nezingxenye ezomile, bese zomiswe emthunzini. Izinto eziqediwe zokugcina zigcinwe engilazi iminyaka emibili ekufinyeleleni kwezingane. Emva kokukhipha umkhiqizo wesitoreji, geza izandla zakho.
Kunezinombolo eziningi zokuphikisana ekwelapheni kwe-aconite. Izidakamizwa ezisekelwe e-Fighter azifisi izingane ezineminyaka engaphansi kwengu-14, abesifazane besesimweni, abesifazane abanamahloni nabomama abahlengikazi. Imithi evinjelwe ngokuqinile ne-aconite kubantu abanokungaboni ngaso sonke isikhathi kunoma yisiphi isici ekubunjweni kwe-aconite.
Ukusabela okubangelwa i-allergenic kungabhekwa ngokuyeka i-drop of juice emgqeni we-elbow, uma kwenzeka ukucasula umuthi onjalo kufanele ulahlwe.
Yini okufanele uyenze lapho ubuthi be-aconite ngaphandle kwezimo zesibhedlela? Okokuqala isisindo sokugcoba. Udinga ukuphuza cishe ngamalitha amathathu amanzi afudumele, amancane anomswakama futhi ubangele ukuphendula okumile. Bese unikezela okunye, okufana ne-carbon activated. Uma unayo, ungaphinde unikeze i-laxative. Qinisekisa ukubiza i-ambulensi. Ungadinga ukwelashwa kwesikhashana eside.
Ekuphetheni, ngingathanda ukusho ukuthi isiguli kumele sinikeze imvume, sicabange futhi sinokulinganisela, ekusetshenzisweni kwe-aconite ekwelapheni. Ukwelapha ubuthi akukwazi ukukuqinisekisa ukuthi uvikelekile okuphelele, unikezwe imiphumela emibi ye-aconite.
Izinhlobo ezidume kakhulu ze-aconite
Izithelo ezinhle zomvini ezimhlophe